Ukuphakama okuphezulu kwe-Metallized Ceramic Vacuum Tubes China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > I-Metallized Tube ye-Ceramic > Ukuphakama okuphezulu kwe-Metallized Ceramic Vacuum Tubes
Le tube yesikhuni se-ceramic ye-Vacuum yenziwe ngezinto ezikhethekile ze-alumina ezihambisana nokumelana nokuqina okukhulu. Ihlale isebenza njengethubhu ye-ceramic insulator noma i-ceramic body insulating body in switch-off for medium or high voltage / currency switch gear.
Njengesicelo salo esikhethekile, isendlalelo sensimbi ehlanganiswa kuzo zombili iziphetho kumele, futhi kudingeke ukuba kube nesibhakabhaka ebusweni. Umshini wokukhipha umshini we-ceramic we-vacuum thina umkhiqizi unegunya lokubamba elithembekile, ubuhle obuhle.
Ubukhulu obuyingxenye encane kuya kwesayizi obuyingxenye enkulu yi-avaibitlity, t min min. ububanzi bungaba yi-1mm, ububanzi obukhulu bufinyelela ku-800mm.Izicabha ezijwayelekile njengezansi:
1. I-ceramic enkulu + ye-Mo / Mn metallization 2. I-ceramic enkulu + Mo / Mn metallization + I-nickle plating
Siyakwazi ukuhlinzeka ngamathuluzi e-ceramic ekhonjiwe ngokucophelela ngezindlela ezihlukahlukene zokugaya, ukuchithwa kwe-CNC, izinqubo zokusika. Ukubekezelelana okungcono kakhulu kungaba +/- 0.001 ngobude, +/- 0.01 ububanzi obungaphakathi nangaphandle .